ယူနတီသတင်းထောက်တွေ ကို ထောင်ချလိုက်တဲ့အပေါ် အမေရိကန် စိုးရိမ်
အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၄ ယူနတီဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ဓါတုလက်နက်စက်ရုံပါသော မျက်နှာဖုံးပုံ
လျှို့ဝှက်ဓါတုစက်ရုံ သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ ယူနတီဂျာနယ် က သတင်းထောက်လေးဦးနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် တို့ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက်တာကို အထူးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မနေ့က ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော် ပြောကြားခွင့်ရှိစေပါမယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံက အာမခံထားပေမဲ့ ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ် လိုက်တာဟာ လွဲမှားနေတာပဲလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြန်ကြားရေးအရာရှိ Peter Velasco က ပြောကြားပါတယ် သတင်းစာဆရာတွေအားလုံးရဲ့ အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာဖို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ စက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် စစ်တပ်က လယ်ယာမြေသိမ်းတာကို ယူနတီဂျာနယ်က ဇန်နဝါရီလမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဓါတုလက်နက် ထုတ်လုပ်မယ့်စက်ရုံလို့ စွပ်စွဲခံရတာဖြစ်ပြီး ဒါကို အာဏာပိုင်တွေက မဟုတ်မမှန်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေကို ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာကို လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး တချိန်ကအထီးကျန်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာပေစိစစ်ရေး မရှိတော့တာတောင် သတင်းစာဆရာတွေကို ခြိမ်းခြောက်တာ၊ ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေက ပိုဆိုးဝါးလာပုံရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အမေရိကန်ုပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် Freedom House ဆိုတဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဖွဲ့ကြီးကလည်း သတင်းထောက်တွေကို ခုလို ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ကြီးမားတဲ့ ထိုးနှက်ချက်တရပ်ဖြစ်ပြီး အပြုသဘောဆောင် အပြောင်းအလဲကို နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်မယ့် လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ မနေ့ကပဲ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အများပြည်သူအတွက် သတင်းပေးတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ၁၉၂၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးလျှို့ဝှက် အက်ဥပဒေ အရ ပြစ်မှုထင်ရှားတယ်ဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တာဟာ ၂ဝ၁၄ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးဥပဒေကြမ်း စိတ်ဓာတ်ကို ချိုးဖောက်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ ပွင့်လန်းလာတယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကို ဖျက်ဆီးတယ်လို့ Freedom House ဥက္ကဌDavid Hramer က ပြောကြားပါတယ်။
ယူနတီဂျာနယ် သတင်းထောက်လေးဦးအတွက် အယူခံဝင်မယ်လို့ ရှေ့နေပြော
Unity ဂျာနယ် သတင်းသမားတွေ ကို အီတလီ က ဆုချီးမြှင့်
ထောင်ကျ သတင်းသမားများ လွတ်မြောက်ဖို့ စုပေါင်းဆုတောင်း
ယူနတီ သတင်းထောက်တွေ ထောင် ဒဏ်လျှော့ပေးရေး အောင်လံမှာ ဆန္ဒပြ
ယူနတီဂျာနယ်သတင်းထောက် ၄ ဦးရဲ့ အယူခံလျှောက်ထားချက် တရားရုံးလက်ခံ
ညီညွတ်ရေး အရေးကြီးဟု ဗကပ ပြောခွင့်ရှိသူ ပြောကြား
မြန်မာကို လူကုန်ကူးမှုထူးခြားစွာ တိုက်ဖျက်နိုင်ငံဟု ကန် သတ်မှတ်
မြန်မာအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှု အနည်းငယ်ဖွင့်ပေးဖို့ အမေရိကန်ပြင်ဆင်နေ
အမေရိကန် မြန်မာ အနာဂတ် ဆက်ဆံရေး ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် မူတည်
US should worry about how to make decision on Snowden's Act of declaration US top secrets. Myanmar should refer to US decision on Snowden's declaration of US top secrets.
Jul 12, 2014 10:55 PM
နေရပ်- ဘန်ကောက် ဘန်းခဲ
သက်သေ အခိုင် အမာပြနိူင်ပြီး တင်ပြခဲ့ရင် ဒီထက်ပိုပြီး ထောင် ဒဏ်ချမှတ်မလား ဆိုတာသိချင် မိတယ်
Jul 12, 2014 05:16 AM